ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးအချက်အလက်များ | Martech Zone
လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ဟာဂူးဂဲလ်ရဲ့ရှာဖွေမှုရလဒ်တွေမှာသင့်ရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ် အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းကသင့်ကိုစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်လူတွေကိုသင့်ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်တာကသူတို့ဟာသူတို့လုပ်နေတာကိုပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုတာမအာမခံဘူး။ ပြောင်းလဲသည့်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်ဤအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးအကြံပေးချက်ခုနစ်ခုကိုလိုက်နာပါ။
ပြောင်းလဲသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်သင့် client သည်မည်သို့သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းသောစိတ်ကူးရှိရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏စာမျက်နှာသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများ၊ သင်၏အီးမေးလ်များကိုစာရင်းသွင်းပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သင်နောက်လိုက်သူများအကြောင်းလူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ၎င်းတို့၏အသက်၊ ကျား၊ မ၊ ပညာရေးနှင့် ၀ င်ငွေနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်ခြင်းကိုအသုံးပြုပါ။
Google Analytics အွန်လိုင်းပေါ်မှာသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမင်းကိုပေးနိုင်တယ်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာနောက်လိုက်များမည်သို့မည်ပုံဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေရန် Twitter Analytics နှင့် Facebook Page Insights ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဖောက်သည်၏တုန့်ပြန်ချက်ကိုမေးမြန်းပါ၊ သူတို့၏အရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ကဘာလဲ၊ သူတို့၏ပြwithနာများနှင့်မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
သငျသညျအလုံအလောက်တုံ့ပြန်ချက်နှင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးတာနဲ့သင်တစ် ဦး ဝယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ၀ ယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သည်သင်၏ရုန်းကန်မှုများ၊ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များကိုဖော်ပြသည့်သင်၏စံပြ ၀ န်ဆောင်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်မှဒန်နီနာဂျာရာ ပြည်နယ်.
သငျသညျအရေးမပါမီ - အရေးကြီးတယ် CTAပြောင်းလဲခြင်းကိုသင်မည်သို့သတ်မှတ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရမည်။ မင်းရဲ့စီးပွားရေးပန်းတိုင်ကဘာလဲ။ လူတွေကိုအထူးလျှော့စျေးတစ်ခုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယူချင်ပါသလား။ မင်းရဲ့အီးမေးလ်စာရင်းကိုဆက်သွယ်ပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်ပါလား
သင်ရောင်းချသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ CTA ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ဤရည်မှန်းချက်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်သင်၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာအတွက်အုတ်မြစ်ချလိုက်ပြီ။ ကနေ Clifton Griffis, အကြောင်းအရာစာရေးဆရာ ရိုးရာ.
သင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီး ၀ ယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်သင်၏အကြောင်းအရာအတွက်သင့်တော်သောခေါင်းစဉ်ရွေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ခိုင်မာသောခေါင်းစဉ်များပေါ်ထွက်လာရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးသည့်အွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Facebook, LinkedIn, Google+ နှင့် Reddit တို့သည်ရှာဖွေရန်စတင်ကောင်းသည့်နေရာများဖြစ်သည်။ သင်ရောင်းသည့်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်နှင့်လူအများပြောနေသည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန်ရှာဖွေရေး function ကိုသုံးပါ။ ခေါင်းစဉ်သည်လူကြိုက်များစေရန်သေချာစွာလေ့လာပါ Ahrefs သော့ချက်စာလုံး Explorer ကို သို့မဟုတ်အလားတူ tools များ။
ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောခေါင်းစဉ်များစာရင်းရှည်ကြီးကိုသင်ပြုစုခဲ့ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့အဲဒါကိုကျဉ်းမြောင်းတော့မည်။ ထိုစာရင်းကိုသူတို့၏စီးပွားရေးတန်ဖိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြစ်နိုင်ဆုံးသောအကြောင်းအရာများသို့လျှော့ချရန်အချိန်တန်ပြီ။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု၏စီးပွားရေးတန်ဖိုးအလားအလာကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏ CTA သည်သင်၏လမ်းညွှန်အလင်းဖြစ်သည်။
သင်၏စာရင်းကိုသူတို့ CTA နှင့်မည်မျှညှိသည်ကို အခြေခံ၍ ထိပ်ဆုံးအတွေးအခေါ်များကိုယူပြီးကျန်အပိုင်းများကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ သင်၏ CTA နှင့်ပါ ၀ င်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သဒ္ဒါမှန်ကန်စွာမှန်ကန်ကြောင်း၊ UKWritings.
နောက်ဆုံးတော့အကြောင်းအရာအချို့ကိုဖန်တီးရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ သင်ရွေးချယ်သောခေါင်းစဉ်အတွက်မည်သည့်အကြောင်းအရာပေါ်လာသည်ကိုကြည့်ပါ၊ မည်သည့်အကြောင်းအရာသည်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်ကိုဂူဂဲလ်ကိုစတင်လေ့လာပါ။ ကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များ အကြောင်းအရာ Explorer ကို သင့်ခေါင်းစဉ်ရှိမည်သည့်ဆောင်းပါးများကိုမကြာခဏဝေမျှလေ့ရှိကြောင်းနှင့်၎င်းတို့အဘယ်ကြောင့်လူကြိုက်များခဲ့သည်ကိုသင့်အားထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သည်။
လူတို့သည်ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမိမိတို့ခံစားချက်အပေါ် မူတည်၍ ထင်သည်။ Essayroo နှင့် အကြှနျုပျ၏စက္ကူရေးရန် အကြောင်းအရာပြောင်းလဲခြင်းကိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုခြင်း၏ဥပမာကောင်းနှစ်ခုလုံးသည်
သင်၏ CTAs ကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ ဟုတ်သည်၊ သင်နေရာချထားသည့်နေရာသည်သင်၏ပြောဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အရေးကြီးသည်။ လူတွေကသင်၏ link များနှင့် CTAs များကဲ့သို့သောအရာများကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိသည်။ ဒါ့ကြောင့်သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာပဲကပ်ထားမလုပ်ပါနဲ့၊ ထိထိရောက်ရောက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
သင်၏အကြောင်းအရာများကိုဖတ်။ ဆွေးနွေးနေသောအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်ပုံရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင် CTA တွင်ထည့်ပါ။ လူတွေကိုသင့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေဆီ ဦး တည်လမ်းပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​သူတို့ကိုခေါင်းနဲ့မရိုက်ဘဲမနေနိုင်ဘူး။ သငျသညျအမျိုးမျိုးသော CTAs ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုသင်၏စာသား၊ ထွက်ရန်ရည်ရွယ်သည့် popups နှင့် sidebar scroll scroll popups ထဲသို့ထည့်ပါ။
ရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားပါ၊ အောင်မြင်မှုကိုသင်မည်သို့သတ်မှတ်မည်၊ သင်၏အောင်မြင်မှုမက်ထရစ်ကဘာလဲဆိုတာသေချာအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏ရလဒ်များကိုမတိုင်းတာလျှင်သင်၏မဟာဗျူဟာမည်မျှအောင်မြင်ခဲ့သည်ကိုသင်မသိနိုင်ပါ။ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုမည်မျှမကြာခဏဝေမျှသည်၊ လူများမည်မျှတွေ့မြင်သည်၊ သင်၏အသွားအလာမည်သည့်နေရာနှင့်သင့်ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်မည်မျှကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ကိုရှာဖွေပါ။
အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့်သင်၏အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုဒ်သို့အသွားအလာပိုမိုရယူခြင်းသည်ကြီးမားသောပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည် သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် measure ည့်သည်အရေအတွက်အားဖြင့်အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာမထားပါ။ ပြောင်းလဲမှုအစစ်အမှန်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ ကောင်းမွန်သောပါဝင်မှုသည်လူများအား ၀ င်ရောက်စေရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏စကားပြောဆိုမှုများကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်ဤအကြံပေးချက်ခုနစ်ခုကိုလိုက်လျှောက်ပါ။